Ikhabethe eliphakathi - I-Airbnb
Soroa, Pinar del Rio, i-Cuba
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Maite
Nikeza! Ukudla kwasekuseni kufakwe ngoJulayi no-August
Igumbi elizimele, negumbi lalo lokugezela, isiphephetha-moya, umbhede nesiqandisi.
Sisendleleni eya e-Soroa endaweni yakwaFrías lapho ungajabulela khona ukubuka okuhle, usebenzise ngokunenzuzo futhi wabelane nathi ngamathuba okuphila ezweni.
Siseduze kakhulu ne-Soroa Waterfall kanye ne-Mirador de Venus.
Ngingathanda ukuthi uzizwe usekhaya futhi ujabulele ukunethezeka, ukunethezeka kanye nesevisi YEKHWALITHI esiyinikezayo.
Igumbi elizimele nelikhululekile endlini etholakala emgwaqeni oya e-Soroa eduze kakhulu nezindawo eziyingqayizivele, zemvelo ukuze ujabulele ukuvakasha kwakho. Sitholakala kumakhilomitha angama-75 ukusuka eDolobheni laseHavana, amakhilomitha ayi-8 ukusuka kumasipala waseCandelaria, amakhilomitha angama-125 ukusuka eViñales Valley kanye namakhilomitha angama-21 ukusuka eLas Terrazas.
Lapho ufika sikunikeza ijusi eyamukelekile, ikhofi noma itiye, ngokuya ngokuthanda kwakho.
Sinegumbi elizimele elilayisha abantu abangu-2.
Sikunikeza ubumfihlo obuphelele, nakuba sinakho amahora angu-24 ngosuku.
Ukwenza ukuhlala kwakho kujabulise sinikeza:
• Igumbi elihlukile elenzelwe wena nje
• Umbhede ophindwe kabili onethezekile
• Igumbi lokugezela langasese
• Amanzi ashisayo nabandayo
• Isipikha somculo
• Iziphanyeko zokugcina impahla yakho
• Inkonzo yasekamelweni nokuhlanza njalo ezinsukwini ezimbili, noma ngokwesicelo sakho
• Isidlo sasekuseni esimnandi nesidlo sakusihlwa ngokwesicelo seklayenti (inkokhelo eyengeziwe)
Ngakho konke ukunethezeka okudingekayo ukwenza ukuhlala kwakho kujabulise !!!!
Bangakwazi ukujabulela izindawo ezivamile ezifana nalezi: i-patio enamabhentshi namatafula ukuze bajabulele intambama yabo ngekhofi elihle laseCuba kanye nesikhala sokuphumula futhi basebenzise imibono emihle yemvelo.
Ikamelo linendawo yokugezela yalo enamanzi ashisayo nabandayo, izinsiza kanye nezinto eziyisisekelo zokuhlanza.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho sinikeza lezi zinsizakalo ezilandelayo:
• Isevisi yamatekisi ngesicelo (inkokhelo eyengeziwe)
• Isevisi yokuthatha/yokwehlisa esikhumulweni sezindiza ngokwesicelo sekhasimende (inkokhelo eyengeziwe)
• Isevisi yokuwasha (inkokhelo eyengeziwe)
• Isevisi yezokuvakasha edolobheni. (inkokhelo eyengeziwe)
• Isevisi yephakheji yezivakashi ezindaweni ezifana ne-Viñales, Havana, Trinidad, Varadero ne-Cienfuegos. (inkokhelo eyengeziwe)
• Uhambo oluya emizileni eya e-Sierra el Rosario, ukubuka izinyoni, phakathi kweminye imizila eqondisiwe. (inkokhelo eyengeziwe)
• Ukuvakashela ama-orchid e-Soroa, impophoma yase-Soroa, i-Castle of the clouds, i-Mirador de Venus. (inkokhelo eyengeziwe)
• Ukugibela emhlane we hhashi. (inkokhelo eyengeziwe)
• Ukuvakashela i-Terraces, lapho ungajabulela khona izindlela eziqondisiwe eziya emasimini ekhofi e-French, i-Canopy adventure, phakathi kokunye. (inkokhelo eyengeziwe)
• Amabhavu esibabule echibini le-Hotel Soroa namamasaji ehhotela. (inkokhelo eyengeziwe)
Sibonakala ngokuba nomusa, inhlonipho, impatho enhle nenhlonipho kubavakashi bethu.
Sizotholakala 100% ukuze sikusize nganoma imiphi imibuzo noma izidingo ongase ube nazo.
Silapha ukuze siphendule noma yimiphi imibuzo futhi sinikeze izincomo / imiyalelo njengoba kudingeka.
Indlu itholakala emphakathini waseSoroa, umphakathi obonakala ngomusa wabantu bawo nokuhlala ngokuxhumana ngqo nemvelo.
4.64 · 73 okushiwo abanye
Uma ungumthandi wemvelo, ufuna ukujabulela ukubukwa okuhle, ama-mogotes, imifula, izinyoni, ungaphuthelwa ithuba lokwazi i-Soroa, etholakala eSierra del Rosario okuyindawo yokugcina izinto eziphilayo. Izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba zifika kule ndawo enhle kakhulu ukuze zijabulele futhi zijabulele umsebenzi omuhle odalwe yimvelo kule ndawo embi, ezungezwe izintaba nemifula.
Kulo mphakathi omncane womasipala wase-Candelaria wesifundazwe i-Artemisa ungajabulela izindawo eziyingqayizivele ezifana:
• Hostal Restaurante Castillo de las las las las las las
•	Ingxangxasi, lapho ungajabulela khona ukubhukuda e-Poceta del Amor.
• Umbono, lapho ungakwazi ukujabulela ukubukwa okuhle kwe-Sierra el Rosario kanye nomphakathi.
ye-orchid Sise-75 km ukusuka eDolobha laseHavana, 8 km ukusuka kumasipala waseCandelaria, 125 km ukusuka eSigodini saseViñales futhi 21 km ukusuka eMigodini.
Izindlela zokuhamba ongazisebenzisa amatekisi nezokuthutha zendawo.
Siseduze kakhulu ne-Soroa Hotel lapho behlinzeka khona ngezinsizakalo ezihlukahlukene ezifana:
•	Izintaba eSierra del Rosario lapho uzoba yingxenye yedolobha elihlobene kakhulu nemvelo.
•	Uhambo oluya eLas Terrazas, lapho ungase ubeke khona inselele ngemikhawulo yakho nge-adventure ekhangayo ku-Canopy Tour.
•	Uhambo oluya ezindaweni ezisobala zekhofi lase-France
•	Fika e-Ceiba, isihlahla esidala kunazo zonke esineminyaka engu-650 ubudala kulesi sifunda, esihlobene namasiko e-Afro-Cuban. Kunomkhuba wokucela isifiso.
•	Kungenzeka ukuphola emanzini angamakristalu omfula i-Manantiales noma i-Bayate River.
•	Amagumbi okugezela e-sulfur pool
•	Ebusuku ungaphumula e-Cabaret yehhotela.
•	Imizila Yokubuka Izinyoni.
• Isevisi ye-Wifi
Hola soy Mayte los invito a que disfruten de mi pequeña cabaña en la comunidad Soroa. Soy cuentapropista mis pasiones son mi casa, mis plantas, y brindarle a los huéspedes la mejor atención posible. En el negocio de arrendamiento estoy dando mis primeros pasos, atenta de que los servicios ofertados tengan la CALIDAD que requieren.
Oferto una sencilla habitación, independiente, cómoda y confortable, que espero sea de su agrado.
Me considero como una mujer muy trabajadora que espera atenderlos y compartir con ustedes durante su estancia, para mí es un placer recibirlos en mi casa de campo, brindándoles siempre las comodidades y ayuda necesarias para que su estancia sea agradable en todo momento.